HTML Email Design | ၏စိန်ခေါ်မှုများ (နှင့် စိတ်ပျက်စရာများ) ကို နားလည်ခြင်း။ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 23, 2022 တနင်္လာနေ့, မေလ 16, 2022 Douglas Karr
သို့သော် အီးမေးလ်တည်းဖြတ်သူများသည် နောက်ကျကျန်နေပါသည်။ ဒါက ဘာကြောင့်လဲ…
HTML အီးမေးလ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအတွက်ထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။
သင့်ကုမ္ပဏီသည် လှပသော HTML အီးမေးလ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်လိုပါက၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝဘ်စာမျက်နှာကို တည်ဆောက်ခြင်းထက် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည်။
စံနှုန်းမရှိပါ။ - မည်သည့်ဝဘ်ကိုမဆို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာမှု မရှိပါ။ စံချိန်စံညွှန်းများ HTML အီးမေးလ်ကိုပြသသော အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်များ။ တကယ်တော့ လက်မဲ့ အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်တိုင်းနှင့် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်တိုင်း၏ ဗားရှင်းတိုင်း ကွဲပြားစွာပြုမူသည်။ အချို့က CSS၊ ပြင်ပဖောင့်များနှင့် ခေတ်မီ HTML ကို ဂုဏ်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများက အချို့သော inline ပုံစံကို ဂုဏ်ပြုကြပြီး ဖောင့်အစုအဝေးကိုသာ ပြသမည်ဖြစ်ပြီး ဇယားဖြင့်မောင်းနှင်သော ဖွဲ့စည်းပုံများမှလွဲ၍ အရာအားလုံးကို လျစ်လျူရှုပါမည်။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူကမှ မလုပ်ဆောင်တာ ဒီအချိန်မှာ တော်တော်ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သုံးစွဲသူများနှင့် စက်များတစ်လျှောက် တသမတ်တည်းပြသသည့် နမူနာပုံစံများကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည် လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီး အတော်လေးစျေးကြီးနိုင်ပါသည်။
အီးမေးလ် သုံးစွဲသူ လုံခြုံရေး - ယခုအပတ်တွင်၊ Apple Mail သည် အီးမေးလ်တွင် ထည့်သွင်းမထားသော ပုံသေ HTML အီးမေးလ်များတွင် ပုံအားလုံးကို ပိတ်ဆို့ရန် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ သင်သည် ၎င်းတို့အား တစ်ကြိမ်လျှင် အီးမေးလ်တစ်စောင်တင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးရမည် သို့မဟုတ် ဤဆက်တင်ကို ပိတ်ရန် ဆက်တင်များကို ဖွင့်ထားရပါမည်။ အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်လုံခြုံရေးဆက်တင်များနှင့်အတူ၊ ကော်ပိုရိတ်ဆက်တင်များလည်းရှိသည်။
အိုင်တီလုံခြုံရေး - သင့်အိုင်တီအဖွဲ့သည် အီးမေးလ်ဖြင့် အမှန်တကယ်ပြန်ဆိုနိုင်သည့်အရာများအပေါ် တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကို အသုံးချနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်ပုံများသည် ကော်ပိုရိတ် firewall တွင် တရားဝင်စာရင်းမသွင်းထားသော သီးခြားဒိုမိန်းတစ်ခုမှ လာပါက၊ ပုံများသည် သင့်အီးမေးလ်တွင် ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းများ၏ပုံများကိုမြင်နိုင်စေရန် ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဆာဗာတွင် ပုံအားလုံးကို အီးမေးလ်များတည်ဆောက်ကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ - ပိုဆိုးတာက၊ အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေဖြစ်တဲ့ အီးမေးလ်တည်ဆောက်သူတွေ (ESP၎) ပြဿနာများကို ချုပ်ချယ်ခြင်းထက် အမှန်တကယ် မိတ်ဆက်ပါ။ သူတို့ အယ်ဒီတာလုပ်နေချိန်မှာ သူတို့ က ရာထူးတိုးတယ်။ သင်မြင်သောအရာသည်သင်ရရှိသောအရာဖြစ်သည် (WYSIWYG) အီးမေးလ် ဒီဇိုင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် မကြာခဏ ဖြစ်တတ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ပလက်ဖောင်းရှိ အီးမေးလ်ကို သင် အစမ်းကြည့်ရှုမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် အီးမေးလ်လက်ခံသူသည် ဒီဇိုင်းပြဿနာ အမျိုးမျိုးကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် အခြားတစ်ခုထက် အင်္ဂါရပ်များ ပိုမိုပါရှိသည်ဟု ထင်မြင်သော အပိတ်ခံထားရသော တည်းဖြတ်သူအစား အင်္ဂါရပ်ကြွယ်ဝသော အယ်ဒီတာကို မသိဘဲ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ အမှန်ပါပဲ... email clients များအားလုံးတွင် တသမတ်တည်း တင်ဆက်ပေးသော အီးမေးလ်များကို လိုချင်ပါက၊ မှားနိုင်ခြေနည်းသောကြောင့် ပိုမိုရိုးရှင်းလေဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်အသုံးပြုသူ ပုံဖေါ်ခြင်း - ဒက်စ်တော့၊ အက်ပ်များ၊ မိုဘိုင်းနှင့် ဝဘ်မေးလ်ကလိုင်းယင့်များတစ်လျှောက် HTML ကို ကွဲပြားစွာ တင်ဆက်သည့် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့် ရာနှင့်ချီရှိသည်။ သင့်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူရှိ သင့်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွင် ခေါင်းစီးတစ်ခုထည့်ရန် ဆက်တင်ရှိနိုင်သော်လည်း၊ အကွက်များ၊ အနားသတ်များ၊ လိုင်းအမြင့်နှင့် ဖောင့်အရွယ်အစားတို့သည် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်တစ်ခုစီတွင် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်သည် HTML နှင့် ကုဒ်တစ်ခုစီကို ကွဲပြားစွာဖော်ပြရန် လိုအပ်သည် (အောက်ပါဥပမာကိုကြည့်ပါ) – အီးမေးလ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ရန်အတွက် အီးမေးလ်အသုံးပြုသူ၏ သီးခြားခြွင်းချက်ဖြစ်သည့် ခြွင်းချက်များတွင် ရေးသားလေ့ရှိသည်။ ရိုးရှင်းသော ဘလောက်အမျိုးအစားများမရှိပါ၊ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်သုံးဆယ်က ဝဘ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ညီမျှသော စားပွဲတင်ပုံစံများကို သင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အပြင်အဆင်အသစ်မဆို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အီးမေးလ်အသုံးပြုသူနှင့် စက်ပစ္စည်းစမ်းသပ်ခြင်း နှစ်ခုစလုံး လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ဝင်စာပုံးတွင် သင်မြင်ရသည့်အရာသည် ကျွန်ုပ်၏ ဝင်စာပုံးတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အရာနှင့် လုံးဝကွဲပြားနိုင်သည်။ အဲဒါကြောင့် rendering tools တွေကို ကြိုက်တယ်။ အက်ဆစ် အီးမေး or အချစ် သင်၏ ဒီဇိုင်းအသစ်များသည် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်များအားလုံးတွင် အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ လူကြိုက်များသော အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်များ၏ စာရင်းတိုနှင့် ၎င်းတို့၏ တင်ဆက်ခြင်းအင်ဂျင်များဖြစ်သည်-
Apple Mail, Outlook for Mac, Android Mail နှင့် iOS Mail တို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ Webkit.
Outlook 2000, 2002 နှင့် 2003 ကို အသုံးပြုပါ။ Internet Explorer ကို.
Outlook 2007, 2010 နှင့် 2013 ကို အသုံးပြုပါ။ Microsoft Word ကို (ဟုတ်ပါတယ် Word!)
Webmail ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ဘရောက်ဆာ၏ သက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသည် (ဥပမာ၊ Safari သည် WebKit ကိုအသုံးပြုပြီး Chrome သည် Blink ကိုအသုံးပြုသည်)။
Web Vs အတွက် HTML နမူနာ အီးမေးလ်
အကယ်၍ သင်သည် ဝဘ်နှင့် အီးမေးလ်တွင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၏ ရှုပ်ထွေးမှုကို သရုပ်ဖော်သည့် ဥပမာကို လိုချင်ပါက၊ Mailbakery ၏ ဆောင်းပါးမှ ပြီးပြည့်စုံသော ဥပမာကို ဤတွင် ကြည့်ပါ။ 19 Email နှင့် Web HTML အကြား ကြီးမားသော ကွာခြားချက်များ:
ခလုတ်ကို မှန်ကန်စွာနေရာချရန်နှင့် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်များတစ်လျှောက် ကောင်းမွန်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် လိုအပ်သော inline ပုံစံအားလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဇယားများကို ကျွန်ုပ်တို့ တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းများကို ပေါင်းစည်းရန်အတွက် ဤအီးမေးလ်၏ထိပ်တွင် ပူးတွဲပါစတိုင်ဂ်တစ်ခုလည်း ရှိပါမည်။
ခလုတ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာသည့် ကျောက်ဆူးတဂ်တစ်ခု၏ case၊ ချိန်ညှိမှု၊ အရောင်နှင့် အရွယ်အစားတို့ကို သတ်မှတ်ရန် အတန်းများပါရှိသော ပြင်ပစတိုင်စာရွက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
လျောက်ပတ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် အီးမေးလ် ဒီဇိုင်းပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်-
Template ဒီဇိုင်း - သင့်အီးမေးလ် ဒီဇိုင်းများတွင် သင်ထုတ်လုပ်လိုသည့် ပုံစံတိုင်းကို လွှမ်းခြုံနိုင်သော ကွဲပြားသော အပြင်အဆင်များနှင့် အကြောင်းအရာ ဘလောက်များဖြင့် ပုံစံပလိတ်ကို ဖန်တီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်တစ်ဦးကို အကောင်အထည်ဖော်သောအခါ၊ ၎င်းတို့ကို အမြဲတမ်း တွန်းအားပေးသည်။ အနာဂတ်အတွက် အီးမေးလ်ကို ဖန်တီးပါ။ - ပေးပို့လိုက်သော အီးမေးလ်ကမ်ပိန်းတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပါ။ ထိုနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်သော ဖြေရှင်းနည်းများကို အပြည့်အဝ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ တီထွင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ရှေ့မှာ အဲဒီ့ ပထမဆုံး အီးမေးလ်ကို ပို့ဖူးတယ်။
နမူနာပုံစံ စမ်းသပ်ခြင်း။ - သင်၏စာရင်းသွင်းသူများသည် သင်၏ HTML အီးမေးလ်ကို မိုဘိုင်းနှင့် ဒက်စ်တော့တွင် အပြည့်အဝစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် အသုံးပြုနေသည့် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်များကို နားလည်ခြင်းသည် နမူနာပုံစံကို အသုံးမပြုမီ အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် photoshop အပြင်အဆင်မှ အီးမေးလ်ကို စာသားအတိုင်း ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်... သို့သော် ၎င်းအား ဇယားဖြင့်မောင်းနှင်ထားသော အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြတ်တောက်ထားသော ကလိုင်းယင့်အဖြစ် အစီအစဥ်ဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးနှင့် တသမတ်တည်းရှိသော အီးမေးလ်ဒီဇိုင်းများကို အသုံးချရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်ခြင်း။ - သင့်ပုံစံပလိတ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး စမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အတည်ပြုရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မျိုးစေ့စာရင်းတစ်ခုသို့ ပေးပို့သင့်သည်။ အီးမေးလ်အတွင်း၌ rendering နှင့်ဆက်စပ်နေသော firewall သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးပြဿနာများ မရှိကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် သင်သည် အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသော လူအုပ်စုခွဲတစ်ခုဖြင့် စတင်လိုပေမည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအသစ်တွင် သာဓကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေပါက၊ သင့်အီးမေးလ်ကို ဝင်စာပုံးသို့ယူဆောင်သည့်တိုင် စစ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာအချို့ကိုပင် သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Template Versioning - ဒီဇိုင်းထုတ်၊ မှန်ကန်စွာ စမ်းသပ်ပြီး လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သော သင့် template ဗားရှင်းအသစ်တွင် အလုပ်မလုပ်ဘဲ သင်၏ အပြင်အဆင်များ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းများကို မပြောင်းလဲပါနှင့်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများသည် ကမ်ပိန်းတိုင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသော ဒီဇိုင်းများကို နှစ်သက်ကြသည်… သို့သော် ၎င်းသည် အီးမေးလ်တိုင်းကို ကမ်ပိန်းတစ်ခုစီအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်၊ တီထွင်ဖန်တီးကာ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၌ အချိန်များစွာကို တိုးပေးသည်။ နောက်ပြီး သင့်အီးမေးလ်ထဲက ဘယ်ဒြပ်စင်တွေက မပါ၀င်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကို သင်နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။ တစ်သမတ်တည်းရှိခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် သင်၏စာရင်းသွင်းသူများ၏အပြုအမူအတွက်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ခြွင်းချက်များ - အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတိုင်းနီးပါးတွင် ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ်တည်ဆောက်သူမှ မိတ်ဆက်ပေးသည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် အီးမေးလ်တည်းဖြတ်သူကို အသုံးပြု၍ သင့်အီးမေးလ်ဒီဇိုင်းကို မထိခိုက်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင့်တစ်ခုသို့ CSS ကြမ်းကို မကြာခဏထည့်နိုင်သည် - သို့မဟုတ် အီးမေးလ်တိုင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည့် အကြောင်းအရာပိတ်ဆို့ခြင်းပင်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့လိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန် အဆိုပါအဆင့်များကို အသုံးချရန် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုအချို့ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် - သင်သည် သုံးစွဲသူများနှင့် စက်များတွင် အလုပ်လုပ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည့် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတွင် သင်၏အီးမေးလ်ဒီဇိုင်းကို စာသားအတိုင်း တီထွင်လိုပြီး ၎င်းကို သင်၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသို့ ပြန်ထည့်ပါ။
အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပလပ်ဖောင်းများသည် ဖောက်သည်များနှင့် စက်ပစ္စည်း ဖြတ်ကျော်ကာ အဆက်မပြတ်ပြန်ဆိုထားသည့် တည်ဆောက်သူများကို ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်းရာတွင် ညံ့ဖျင်းသောအလုပ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ကြီးကျယ်သောပလက်ဖောင်းများစွာသည် စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အကျယ်တဝင့် သုံးဖူးတဲ့ တစ်ခုက စထရီပို.
Stripo သည် အီးမေးလ်တည်ဆောက်သူသာမက၊ ၎င်းတို့တွင် အလွယ်တကူ တင်သွင်းနိုင်သော တင်းပလိတ် ၉၀၀ ကျော်ရှိသော စာကြည့်တိုက်တစ်ခုလည်း ရှိသည်။ အီးမေးလ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးသည်နှင့် သင်သည် ESP 900+ နှင့် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်များအပါအဝင် အီးမေးလ်ကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ MailChimp၊ HubSpot၊ Campaign Monitor၊ AWeber၊ eSputnik၊ Outlook နှင့် Gmail။ Stripo နမူနာပုံစံများအားလုံး၏ အကောင်းဆုံးသည် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့် 40 ကျော်တွင် ၎င်းတို့ကို စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ပါဝင်သော အီးမေးလ် တင်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူ လာပါသည်။
Stripo Editor Demo သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
ထုတ်ဖော်ချက်- ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်ထံသို့ ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတိုင်းနီးပါးတွင် ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ဖောက်သည်အချင်းချင်း အီးမေးလ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲကာ အသုံးချတတ်သူ။ ငါလည်း ဆက်စပ်မှုတစ်ခုပါ။ စထရီပို ပြီးတော့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော့် link ကို သုံးနေပါတယ်။
Tags: အရောင်တမှိတ်အီးမေးလ်ဆောက်သူအီးမေးလ်က client များအီးမေးလ်ဒီဇိုင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်ပြန်ဆိုခြင်းအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအယ်ဒီတာအီးမေးလ်ကဝန်ဆောင်မှုပေးအီးမေးလ်ပုံစံဒီဇိုင်းအီးမေးလ် နမူနာပုံစံ စမ်းသပ်ခြင်း။အီးမေးလ် နမူနာပုံစံဗားရှင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း။အီးမေးလ်တင်းပလိတ်များအီးမေးလ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းအီးမေးလ် စာသားတည်းဖြတ်သူhtml အီးမေးလ်အင်တာနက်ရှာဖွေသူစာတိုက်မုန့်လုပ်ငန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုcloud်းတိမ်ကိုစီးမိုက်ခရိုဆော့စကားလုံးstripoကွမ်းခြံကုန်းwebmail ဝန်ဆောင်မှုနေပြည်တော်